Horonantsary toy ny ahoana momba ny faritra misy anao no ho atoronao anay? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2019 7:52 GMT
Sary: mpampiasa Flickr Michael Gebert / CC 2.0
Io 2016 io, maninona moa raha hitarina mihoatra noho ilay Hollywood na Bollywood nahazatra ny faravodilanitry ny horonantsary fantatrao?
Manana vondrom-piarahamonina isankarazany isika ato amin'ny Global Voices, misy mpikambana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Mazàna, ireo horonantsary novokarina tany amin'ny firenena ipetrahantsika no tsy tafiditra anaty lisitr'ireo fetibe eo amin'ny sehatra iraisampirenena, ary tsy mbola nandre velively ny momba azy ireny ireo sisa rehetra anaty tontolon'ny sarimihetsika…
Ndao andramantsika hovaina izany! Katsahanay ny hanangana lisitra iray ahitàna ireo sarimihetsika izay mety ho solom-baravarankelin'ireo faritra niavian'ireo mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina GV. Izay no ento hisainana azy:
Horonantsary toy ny ahoana no ho atoronao olona iray handeha hitsidika ny firenenao ary mba te-hahafantatra tsara azy kokoa azy ireny?
Izahay dia mitady manokana ireo firenena tsy dia fantatra loatra any ivelany ny sarimihetsika misy ao aminy — nefa na avy aminà firenena toa an'i Iràna sy Meksika aza ianareo, izay malaza erantany ny sarimihetsika vokariny, raisina an-tanan-droa handray anjara! Saingy ezaho ny misaina momba ny sarimihetsika iray izay mety tsy ho ren'ny vahiny iray mpankafy sarimihetsika mihitsy.
Tsy voatery ho famokarana vao haingana ilay izy: fa na efa tamin'ny 1950s na tamin'ny taona lasa, ny zavadehibe dia hoe sarimihetsika tsara, mahafinaritra ilay izy!
Ho angonintsika daholo ireo valinteny ho ao anaty lahatsoratra iray, ary havoaka ao amin'ny pejy fandraisan'ny Global Voices. Ny Alahady 29 Desambra no fetra farany.
Hahafahana mandray anjara dia iangaviana hanmeno ireto andalana vitsivitsy ireto, atao ao anatin'ny faritra fanehoankevitra etsy ambany, milaza ny:
Toerana onenana (tanàna, firenena)
Lohatenin'ny sarimihetsika, ny taona ary ny firenena namokarana azy
Famintinana fohy (andalana roa raha be indrindra)
Nahoana no izy io no atoronao
Raha azo atao, pikantsary iray avy amin'ilay sarimihetsika
Raha azo raisina ety anaty aterineto ilay sarimihetsika, omeo ny rohy mankany.
Tantaran'ny Blaogim-Piarahamonina GV farany